निर्मलाहरुको न्याय कहाँ पुग्यो सरकार ? | Jukson
निर्मलाहरुको न्याय कहाँ पुग्यो सरकार ?
जेठ २३, पोखरा ।
सिमसिमे पानीमा भिजेको रोड साईडमा रुझ्दै आज फेरि एकाबिहानै पोखरामा एउटा र्याली निस्कियो । हल्का भिजेका प्लेकार्डहरुमा लेखिएका शब्दहरुले चिच्च्याएर भनिरहेका थिए, सरकार ! निर्मलाहरुको न्याय कहाँ पुग्यो ?
पोखरा महानगर बाल मंचको आयोजनामा निर्मलाहरुको न्याय कहाँ पुग्यो सरकार नामक वृहत दबाब मुलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
विभीन्न संघ संस्थाहरु तथा अभियन्ताहरुको ऎक्यबद्वताका साथ सो कार्यक्रम बिहिबार पोखरामा सम्पन्न भएको हो।
मानव अधिकारचोक चिप्लेढुङ्गाबाट सुरु भएको र्याली पृथ्वीचोकमा पुगि सभामा परिणत भएको थियो।कार्यक्रममा सफलता बास्तोलालेले निर्मला पन्तको रुपमा प्रतिनिधि पात्र बनेर हजारौं निर्मलाहरुको न्यायको लागी अपिल गरेकी थिईन।
कार्यक्रममा बोल्दै युवा अभियन्ता सरोज गौतमले ९ महिना अघि सुरु भएको आन्दोलनलाई बाल मंचले पुन: ब्युताएकोमा धन्यवाद दिए।
महानगर बाल मंचका प्रवक्ता आरोग्य मोहन काफ्लेले आफुहरुलाई कार्यक्रमको बारे विभिन्न आरोप र धम्कीहरु आए पनि बिचल्लीत नभई लागेको बताए।निर्मला पन्त त एकजना प्रतिनिधि पात्र मात्र भएको बताउदै काफ्लेले यो प्रदर्शन हजारौं निर्मलाहरुको न्यायका निम्ति भएको र अब सबै जनता यस्ता विषयमा आफ्नो राजनितिक आस्था भन्दा माथी उठेर सोच्नु पर्ने तर्क गरे।
त्यस्तै अभियन्ता लिलाधर लामिछानेले अब यस्ता कार्यक्रमहरु बालबालिका र युवा अभियन्ताहरुले भन्दा पनि राजनितिक दलहरुले नै उठाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रमका संयोजक एवम् बाल मंचका उपाध्यक्ष सुवास अधिकारीले देशमा घट्ने बाल यौन हिंसा तथा बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटनाको विरुद्ध सदैब आवाज बुलन्द पार्ने बताए । उनले उपस्थित हुने सम्पुर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । यस्ता अभियानलाई आफुहरुले निरन्तरता दिने पनि प्रतिबद्वता व्यक्त गरेका थिए।
कार्यक्रममा हामी कहिलेसम्म असुरक्षित सरकार ?, हटेर होइन डटेर सामना गरौं, बलात्कारीलाई फासी देऊलगायतका नारा लगाइएको थियो ।
महानगर बाल मन्चका सचिव सन्देश बिकले संचालन गरेको कार्यक्रममा बाल अभियन्ता निलकण्ठ त्रिपाठीले कबिताको मार्फत सरकार निर्मलाहरुलाई न्याय दिलाउन चुकेको बताएका थिए। पोखरा भित्रका सकृय संघ संस्थाहरु र दर्जनौ व्यक्तिहरुले ऎक्यबद्वता जनाएको कार्यक्रममा हस्ताक्षर संकलन पनि गरिएको थियो।
उक्त हस्ताक्षर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको माध्यमबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरीषदको कार्यक्रम समक्ष पुर्याउने बाल मंचकि अध्यक्ष एलिना श्रेष्ठले जानकारी दिएकी छन्।
कास्कीमा मृत अवस्थामा फेला
पोखराको फिर्के पुलबाट ट्रक खस्यो ; एक जना घाईते
‘न्यूयोर्कमा नेपथ्य भाका गुञ्जने ’ - किरणकृष्ण श्रेष्ठ, नेपालय
इपीएल क्रिकेटः आज भैरहवा र चितवन साथै ललितपुर र पोखरा भीड्ने
नेपालको १० हजार वर्ग किमी जमिन गायव